Seenaa gabaabaa obboo Bakar waaree: “Bada Bakar Waaree yaa ba’eessa nama, Osoo si deessee haatee marraa lama” … – Welcome to bilisummaa
Seenaa gabaabaa obboo Bakar waaree: “Bada Bakar Waaree yaa ba’eessa nama, Osoo si deessee haatee marraa lama” …
SEENAA BAKAR WAAREE Lolli Calanqoo lolaa ittisa imala gabroomfattoota nafxanyaa ture. Lolli kun Amajjii 6 bara 1887 humna Minilikiin hogganamuufi ummata Oromoo, Oromiyaa bahaa jiraatan kanneen gooticha Bakar Waaree tiin hogganamu giddutti taasifame. Bakar Waaree kan dhalate Aanaa Jaarsoo bakka Laga Mixee jedhamutti. Bakar Waaree gumii bultumaa tan Raabaa fi Doorii Bareentummaa Addeellee maadheftattee Fugug bulchitu keessatti qondaala guddaa Birmajii yeroo sanaa ture. Keessattuu dhaddacha mooraa Fugug tan teessuma man-bultii gorguddoo kudha lamaan Alaa: Nuunnu, Meettaa,Diiramu, Goollo, Buubbu, Abbay, Galaan Abbaadho, Ere, Kaako, Arroojjii, Gutayyu keessatti haala sochii siyaasaa fi hawaasummaa irrattii addaa durummaadhaan murtii (hoggansa) kennaa kan ture.
Tags Bakar Waare Calanqoo Calii seenaa
Previous Qophii addaa Hiriira Washington DC Ilaalchisee Ibsa qopheessitoota Irraa kanname Ebla 15,2016
Next According to the rights group Reporters Without Borders Ethiopia is not an easy place for some journalists to operate..